TOMATO "KING OF THE GIANTS": SHARAXAADA KALA DUWAN, SIFOOYINKA IYO AGROTECHNICS EE BEERTO, DARYEELKA IYO BEERISTA YAANYADA (SAWIRKA) - NOOCYO YAANYO
Sida loo abuuro oo u koraan yaanyo "King of Giants"
Tamaandhadu waa khudaarta caanka ah ee miiskeena sanadka oo dhan. Waxaan u muuqan jirnay muuqaalkeena cuntadeena Christopher Columbus, kuwaas oo dhaqanka u keenay Yurubta Yurub laga soo bilaabo qarnigii XYI. Laba sano ka dib, yaanyo waxay timid Ruushka. Halkan waxay ku koraan dalagyo dalxiis ah, sida miraha aaney u helin wakhti ay u bislaadaan heerkulka hooseeya. Maanta, jaangooyadu waxay hubiyeen in miraha dalaggu ku kori karo jawi kasta. In this article waxaan ka hadli doonaa caan ah, inkastoo noocyo kala duwan ee yaanyada, "King of Giants."
Warshadu waa mid dhab ah qiyaasta. Waxaa lagu beeray baadiyaha aqalka dhirta lagu koriyo oo gaari kara 180-200 sentimitir. Dhinaca dhulka, koritaanku maaha mid muhiim ah. Halkan, dhererka duurka wuxuu gaaraa 150-160 sentimitir. Nasiib darro, qiyaasahaas oo kale, asliga ah ee yaanyo waa mid aad u nugul. Under miisaanka miro waaweyn weyn si fudud u jebin karaa.
Gawaarida cirifka ah ayaa qashin la mid ah. Waxay ku yaalaan iyada oo loo marayo sadex ama afar jeer. Ukumaha waxaa loo sameeyaa gacanta marka loo eego muuqaalka buug-warbixineed ee sagaalaad.
Faa'iidooyinka kala duwan:
adkaysi u leh dabaylo goor dambe;
miro waaweyn oo soo bandhigid fiican;
miraha waa mid guud oo la isticmaalo;
gaadiidka u fiican iyo ilaalinta tayada miraha.
geedo dabiici ah (waxay u baahan yihiin ka hor diyaarinta ka hor beerashada iyo daryeelka wanaagsan);
miraha waa in la soo goosto, maadaama ay daadinayaan luminta bandhiggooda;
ma jecla waraabin badan.
Muuqaal kala duwan oo ka mid ah noocyada kala duwan ee dadka kale waa caabiga cudurada iyo cayayaanka.
Ma taqaanaa? Marka tamaandhada Yurubta laga soo galo qarnigii XYI, waxay muddo dheer u arkaan inaysan ku habboonayn isticmaalka iyo xitaa sunta. Waxaa badanaa lagu tuuraa cadaadiska sida sunta.
Midhaha "The King of the Giants" waa midab casaan, wareegsan, waxoogaa hoos loo dhigo iyadoo loo eegayo xadhig xuddunta ah ee foomka. Miisaanka mid ka mid ah yaanyada celcelis ahaan qiyaas ahaan u dhexeeyaa 500 ilaa 1000 g. Waxaa jira xitaa tijaabooyin waaweyn. Jidhkoodu waa cufan, fareem.
Waxaa loo qaybiyaa 6-8 koobiyaal. Dhadhanka waa hodan, macaan, oo leh qoraallo iftiin leh. Haddii tamaandhadu ka baxo, saxarada ayaa dhadhanka dhadhanka leh.
Qiyaastii 5.5-8 kg oo yaanyo ah ayaa laga saari karaa hal baadiyaha. Harvest waxay noqon kartaa 115 maalmood ka dib markii laga beerto geedo dhul furan, sidaas darteed kala duwan ayaa loo arkaa Bisaylkiisa hore.
Si aad u hesho noocyada kala duwan ee yaanyada waxaa ka mid ah "Samara", "Explosion", "Kiss of Geranium", "Bokele", "Caspar", "Batyan", "Irina", "Labrador".
Xeerarka doorashada geedo waxay la mid tahay dhammaan noocyada yaanyada.
Fasaxyada waa inaanu ka badnaan 45-60 maalmood. Waa in la doorto dhammaanba da'da isku midka ah, sidaa darteed koritaanka iyo tuunbada midhaha ayaa ah labis.
Heerka geedo waa inay ahaataa ilaa 30 sentimitir. Intaa waxaa dheer, tan iyo "King of the Giants" waa warshad dheer, waa in ay jiraan 11-12 caleemo on asalka ah.
Geedka dharku waa inuu ahaadaa mid u eg qalin. Midabkiisa, sida midabka caleenta, waa inuu noqdaa mid cagaaran.
Nidaamka asaasiga ah waa in si wanaagsan loo horumariyo, oo aan lahayn cilado muuqata.
Waa in la hubiyaa jiritaanka cayayaanka iyo infekshannada ku jira seedling. Cuntada ukunta waxaa la dhigaa caleenta, haddii uu jiro cudur, waxay bedeshaa caleemaha. On asliga ah waa in aanay noqon brown ama madow madow.
Leaves waxay noqon kartaa mid aad u cagaar ah oo isku laaban. Tani waxay muujinaysaa geedo aan habooneyn oo sii kordhaya. Isbeddeladani waxay muujinayaan carro badan oo carrada ku jirta.
Geeduhu waxay iibiyaan iibka waa inay ku jiraan sanduuqyo dhulka ah iyo muuqaal cusub.
Waa muhiim! Haddii, markaad dooranaysid seedling ugu yaraan hal ilmo, waxaa jiray calaamado cudur ama cayayaan ah, ha iibsan.
Meelaha loo doortay beerta, ciidda waa in si dhexdhexaad ah la caleemo leh Bacriminta, oo leh acidic dhexdhexaad ah, dhexdhexaad ah qoyan, si fiican u kululeeyo iyo hawo. Tamaandhada waxaa lagu beeray sariiraha, halkaas oo qajaarka, zucchini, bocorka, squash, gawaarida, kaabajka, basasha cagaaran, dabacasaha, beetroot iyo digada cagaar ayaa koray.
Waxaa ka mid ah dhaqamadaas, kuwa ugu fiican ee ka soo horjeeda waa kaabajka iyo bocorka. Laguma talinayo in la beero tamaandhada ka dib markii yaanyada, baradhada, basbaaska, eggplants, physalis, peas.
Diyaarinta ciidda waa sida soo socota:
sariiraha nadiifinta ee haramaha iyo miraha dalagyo kale;
baaritaanka ciidda ee cayayaanka;
samee si ay dhulku u qabtaan qoyaan;
Cagaarshowga carrada wuxuu keenaa celcelis;
samee biohumus, ash, ciid.
Waxaad ku shubi kartaa isku dar ah ciidda khaaska ah, oo lagu gado dukaamada, sariirta aad dooratay, ama adiga ayaa sameeya. Taas awgeed waxaad u baahan tahay peat, cawska oo ah saamiga 3: 1, balka, mullein iyo peat ee saamiga 1: 3.
Dhammaan tan waxa lagu qasi karaa ciid iyo peat, oo la qaato isla lacagtaas, iyo sidoo kale carrada, digada iyo ash.
Wixii quudinta yaanyada, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo superphosphate, nitroammofosku. Isticmaalka isticmaalka bacriminta organic, oo lagu qasi jiray biyo, iyo faleebo ah ee maraboob. Samee quudinta waa in ay ahaato sida ay u socoto nidaam hore loo sameeyey.
Waxay noqon kartaa wax sidan oo kale ah: 10kii maalmoodba mar. Marka ugu horaysa, Bacriminta waa in la dabaqaa 14 maalmood ka dib markii laga beerto geedo.
Goobta furan, geedo waxaa la beeray markii uu dhaxan joojiyo. Wixii horumarinta caadiga ah waxay u baahan tahay heerkulka hawada ee 22-25 digrii iyo wax badan oo iftiin ah. Haddii heerkulku hoos u dhaco ilaa 10 digrii, manka ma uusan dillaacin, oo aan lahayn bacriminta, ugxansiduhu wuu burburin doonaa.
Oo marka ay jirto iftiin ku filan, koritaanka ee seedling hoos u, hoos u fidiyaa iyo isbedel ee midabka, noqday cirro. Ma jecle yaanyo badan oo qoyan. Marka ay bilowdo in ay si firfircoon u horumariso cuduro badan.
Koraaya laga bilaabo abuurka ilaa geedo guriga
Seedling "King of Giants" waxay ka wanaagsan tahay koritaanka madaxbanaan. Sidaas waxaad ku kalsoon tahay tayada geedo. Si aad u hesho geedo wanaagsan, akhri macluumaadka hoose.
Seeds for beerto la door biday in laga iibsado alaab-qeybiyayaal la aamini karo.
Kadibna waxaa jiri doona damaanad ah in ay u dhigmaan noocyada kala duwan ee bukaanka waxaana lagu daaweeyaa cudurada iyo cayayaanka. Haddii aad soo ururinayso wax soo saarkaaga ama waxaad ka soo iibsataa iibiyeyaasha aan la garanayn, ka dibna miraha waa in lagu daaweeyaa xal of Kansar dhalaanka.
Kadibna biyo raaci biyo. Ka dib markii la dhigay maalin si xal loogu kiciyo koritaanka.
Mawduuca iyo meesha
Wixii geedo isticmaalaan sanduuqyada. Waxay ka buuxsamaan isku dar ah ciidda khaaska ah iyo abuurka lagu beeray. Sanduuqyada sare ayaa lagu daboolay dhalooyinka ama filim si ay u abuuraan saameyn aqalka dhirta lagu koriyo. Geedka abuurista waxaa la dhigayaa meel diiran oo leh heerkul aan ka hoosayn 18 digrii.
Nidaamka abuurka abuurka
Beeridda abuurka ah ee geedo waxaa la fuliyaa dhammaadka February bilowga March. Marka hore, ciidda waa la diyaariyaa: laba qaybood oo dhulka ah ayaa isku qasan beerta leh qayb ka mid ah ciid webiga. Isku dar ah waa in la kariyaa, ka dibna lagu daraa dambaska, dhulka ku shub budada.
Marka ciidda waa la kala firdhiyey sanduuqyada, waxaad bilaabi kartaa in ay geedi socodka abuurka leh kaneecada. Dhammaan abuurka ayaa ku faafay qulqulka qoto dheer ee amarimka mitirka iyo masaafada cabbiraha midba midka kale. Si tartiib-tartiib ah u soo galaan miraha ciidda waxaa lagu buufiyaa dhalada buufin.
Sanduuqyada waxaa lagu daboolay filim ama galaas waxaana la dhigayaa kuleylka ilaa biqilka. Marka caleemaha ka muuqan doonaan saddexda caleemo, waxay u baahan yihiin in la quusiyo. Geedo waxaa lagu beeray dheriyo kala duwan. Sannad saddexaad ama afaraad ee Maajo, geedo lagu beeray karaa lagu koriyo meel joogto ah.
Caleemaha waa inay helaan nal ku filan. Haddii maalintii iftiinka uusan ahayn mid aad u ballaaran, markaa waa inaad la hadashaa iftiinka. Waraabinta waa in ay noqotaa mid wakhtigeedu yar yahay oo dhexdhexaad ah. Marka geedo diyaar u yihiin transplanting dhul furan, waxay u baahan yihiin in ay maraan koorso nidaamyo heysashada.
Waxay ka kooban yihiin kuwan soo socda: todobaadyo iyo badh ka hor inta aanad dhicin, geedo waa in loo qaadaa hawo cusub. Kulanka ugu horeeya, 30 daqiiqo ayaa ku filan, ka dibna saacad iyo badh iyo ugu dambeyn shan saacadood.
Laba maalmood ka hor dhammaystirka nidaamka, sanduuqyada leh geedo ayaa laga tagi karaa aqalka dhirta lagu koriyo illaa 7-8 saacadood, laakiin tixgelinta xaqiiqda ah marka dhibcahan laga yaabo inay dhaxan tahay marka hore la waayay.
Geedo gawaarida lagu beerayo dhulka
Geedo geedo ee ciidda waxaa la fuliyaa ka dib dhammaadka dhaxan. Ugu yaraan hal baadiyaha waa in lagu beeraa hal mitir oo laba jibbaaran oo sariirood ah, oo labadaba ah. Bush waa inuu leeyahay hal ama laba afkoda. Si taas loo sameeyo, waa inaad tirtirtaa tallaabooyinka.
Marka seedling loo tarxiilay dhulka dhulka, baadiyaha waxaa la qodayaa dhulka oo waxaa la dhigaa meel dalooliyey. Rusheeyey dusha sare ee dhulka. Dalagyada beeruhu waxay u baahan yihiin waraabin joogto ah ilaa ay ka qaadato xidid meel cusub.
Tiknoolajiyada beeraha ee abuurka yaanyo koraya oo dhulka hoostiisa ah
Farsamada yaanyada sii kordhaya ee abuurka ah ee berrinka bannaan wuxuu aad u la mid yahay habka seedling, laakiin weli waxay leedahay sifooyin gaar ah.
Tamaandho waa dalagyo kulul oo jecel, sidaas darteed waxay ku kori karaan beeraha furan ee gobollada koonfureed. In latitudes diiran, waxaa lagama maarmaan ah in lagu abuuro abuurka for geedo ee sanduuqyada ama lagu koriyo, tan iyo mudada diiran ma aha muddo dheer, iyo miraha ma heli doonaan waqti ay u bislaadaan.
Laakiin xitaa haddii gobollada koonfureed ay suurta gal tahay in lagu beero abuurka dhulka, furaha sariiruhu wali waa u baahan yahay in lagu daboolo filim si loo abuuro microclimate gaar ah. Doorashada meel ka hooseysa aqalka dhirta lagu koriyo ayaa la mid ah in la doorto meel loogu beero geedo.
Nidaamka abuurka abuurka ah ee dhulka
In lagu koriyo diyaar u ah ama aqalka dhirta lagu koriyo, miraha waxaa lagu beeray 55-65 maalmood ka hor inta aanad isu beddelin dhul furan.
Qiyaastan waa dhammaadka bisha Maarso - bilowgii Abriil. Waxyaabinta dhirta waxaa loola dhaqmaa xal xashiish ah. Hal mitir laba jibbaaran oo aag ah waa in la isticmaalaa 9-10 g oo ah miraha.
Meelaha iyo safafyada waa in lagu meeleeyaa fogaan ah 3-4 cm midba midka kale. Abuur abuurka heerkul ah + 23 ... +25 digrii. Marka caleemaha kowaad soo baxaan, heerkulka kuleylka kulul ee kulul waxaa la yareeyaa 4-7 maalmood ilaa + 12 ... +15 digrii inta lagu jiro maalintii iyo + 6 ... +10 digrii habeenkii.
Xumad fiiqan oo heerkulku waa lagama maarmaan si loo abuuro abuurka si loo joojiyo noolasha kharashka ilaha dhaqaalahiisa iyo bilaabi doono dhammaan waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee ciidda. Iyadoo ay soo ifbaxday waraaqaha ugu horreeya ee dhabta ah, heerkulka ayaa mar kale kor loo qaado + 20 ... +26 digrii.
Waa muhiim! Waqti ka waqti, aqalka dhirta lagu koriyo waa in la riixo si aan abuurku u noqon mid qoyan iyo cufan.
Wixii waraabinta waa lagama maarmaan in la dhiso habka waraabka. Waa inay ku jirtaa biyaha heerkulka qolka (+20 ° C). Sidan oo kale, yaanyada yaryar ayaa ku filan hal mar ama laba jeer toddobaadkii. Waxaa lagu talinayaa in la sameeyo habka qorraxda ka hor, gaar ahaan haddii yaanyada ay ku koraan berrinka bannaan, iyo ciidda ma helin waqti ay ku kululaan ku filan ka dib jiilaalka.
Laga soo bilaabo waraabinta, warshad waa la waraabiyaa kaliya haddii ay dhacdo abaaro daran, ka dibna laba jeer xagaaga. Xilliga roobka waxa aad sameyn kartaa iyada oo aan lahayn waraabka.
Haddii yaanyada horay loo beeray meel joogto ah, ka dib marka abuurista ugxan iyo miro miro ayaa bilaabmaa, xaddiga waraabinta waa in la kordhiyaa ilaa laba ama saddex jeer toddobaadkii.
Xumaynta ciidda iyo jaridda dhirta
Ciidda waa in la furfuraa ka dib waraabka. Inkasta oo geedo weli yihiin kuwo da 'yar, waa ku filan in lakabka lakabka ugu yaraado si aan u dhisin qolof ah. Marka ay duurka u koraan oo ay sii xoogaystaan, inta lagu jiro dabacsanaanta waxaad ku dhimi kartaa qoto dheer dhulka 4-5 cm, iyadoo wadajirta dabacsanaanta cawska ciidda ayaa sidoo kale laga saaraa.
Marka tamaandhada lagu beddelo meel joogto ah, dabacsanaantii hore ee carrada iyo jaridda dhirta waxaa la sameeyaa 10 maalmood ka dib markaan ku tallaalay. Marka ugu horeysa, waxay ku dhereraan 8-12 cm oo ciidda, wakhtiyada xiga - 4-5 cm Haddii roobab culus ay soo mareen, ka dibna iyaga ka dib waxaa sidoo kale lagama maarmaan ah in la dabciyo ciidda.
Sidaas awgeed qoyaanka ayaa ka sii baxaya yaraa, ugxantii ma uusan korin, waxaa lagula talinayaa inuu sariiro sariiro ah.
Tan iyo "King of the Giants" waa dhir ku filan, waa lagama maarmaan in si dhow ula socdaan samaynta baadiyaha iyo waqti ka waqti si ay u fuliyaan isbedelka. Waxay ka kooban tahay qanjirada. Xiddiga kowaad (ka baxsiga u dhaxeeya asaasiga weyn iyo buug-yaraha) ayaa u muuqda iyada oo la socota buraashii hore ee ubaxa.
Baro sida si haboon u tuujin yaanyada beerta furan iyo aqalka dhirta lagu koriyo.
Isagu waa kan ugu xoog badan waana laga tagi karaa. Dhamaan kuwa kale ee soo muuqda waxay hoos u dhacaan. Waxaa lagu kala qaadi karaa gacmo ama gooyo. Haddii aad qorsheyneyso inaad jeexato, markaa waxaad u baahan tahay inaad ka shaqeyso gacmo gashi. Waxay si fudud u jajabaan marka ay dhinac u jeedaan.
Haddii aad la shaqeysid dillaac beerta, ka dibna ka dib marin kasta, waxaa lagama maarmaan ah in jeermiska qalabka la nadiifiyo potassium, si aanay u faafin cudurka. Tirada nidaamka - mar toddobaadkiiba hal mar.
Haddii aanay suurtogal ahayn in la caleemo caleemaha had iyo jeer, marka ugu horeysa ee ay yihiin laga saaro dhexe ee xagaaga iyo mar labaad - hal bil ka hor goosashada ugu dambeeyey.
Waa lagama maarmaan in la sameeyo baadiyaha si aaney u faafinhaddii kale waxaa ku adkaan doonta isaga inuu qaado miisaanka miro waaweyn. Si loo gaaro iswada dabiiciga ah ee baadiyaha wuxuu kaliya ka tagi karaa hal ama laba afkoda. Haddii baadiyaha si liidata loo sameeyay, ka dibna waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro ubax dheeraad ah.
Marka burushka ugu horreeya uu bilaabmayo inuu muuqdo, waxaa lagama maarmaan ah in la jarjaro caleenta dhulka.
dhirta ayaa si sahlan u qaadaya miro culus;
marka baadiyaha ay tahay taakac, qorraxda qorraxda si siman ayay u dhacdaa. Sidoo kale booskan, baadiyaha waa hawo wanaagsan;
marka midhaha uusan taaban dhulka, ma aha mid ka cabsanaya roobabka culus iyo jiirarka, slugs ma dhumin doonaa iyaga;
dhirta ku xiran tahay waxay u fududahay biyaha, geedi socodka cudurrada iyo cayayaanka, daryeelka carrada ku wareegsan.
Waxaa jira siyaabo badan oo lagu garto.
Baro sida loo yareeyo yaanyada aqalka dhirta lagu koriyo iyo berrinka bannaan.
Waxaan qeexaynaa qaar ka mid ah kuwa ugu caansan:
adigoo isticmaalaya jeexa. Habkani waxaa badanaa loo isticmaalaa dhaqanka sii kordhaya ee berrinka bannaan. Fisigu wuxuu noqon karaa mid bir ah ama alwaax ah, markaad kalsoontahay. In height dhererkiisu waa 200-250 cm, taas oo ku xidhan dhererka baadiyaha. Taageerada waxaa loo raraa dhulka oo fogaan ah 10 cm oo baadiyaha ah si loo dhaawaco nidaamka asaasiga ah. Warshadu waxay ku xidhan tahay weel si qunyar ah. Xiddiga ama xarigga dharka ayaa lagu duuduubay marka hore taageerada, ka dibna agagaarka stem iyo ugxan. Marka baadiyaha koraa, waa lagama maarmaan in la xiro marka lagu daro;
on trellis ah. Habkani waa mid faa'iido leh haddii aad haysato beerashada dalagga ballaaran. Si aad u dhisto taageero, waxaad u baahan tahay inaad qaadato bar ama boogaha. Waxaa lagu kaxeeyaa bilawga iyo dhammaadka safka oo lagu foogsan yahay silig. Waxaa lagu kala qaadi karaa kali, at height ah 200 cm, iyo baadiyaha ku xidhnaa, ama dhowr fiilo, iyo baadiyaha ah waxaa la faafin doonaa iyaga. Ku xiri xarig ama xarig agagaarka dhirta;
Waa muhiim! Haddii sariirta ay aad u dheer tahay, markaa waxaad u baahan tahay in yar oo ka mid ah boogaha.
xadhig xadhig ah. Waxaa lagu sameeyaa qaab ah silsilad ama naqshad alwaax ama bir ah. Waa sahlan tahay inaad sameysid qaabka cylindrical ee biraha. Xadhiggu wuxuu ku wareegsan yahay goobo. Waa inuu jiraa dhowr goobo oo kala duwan. Hal wareeg gudaheeda, xirtii baararka ee masaafada u dhaxeysa. Iskudhicilku ma dhicin. Kadibna, isla masaafadaas, wejiyada haray waxay ku xiran yihiin baararka. Naqshad maskaxeed ayaa laga sameeyay qoryo. Habkani wuxuu la mid yahay farqiga kaliya ee saldhigku aanu ahayn goobo, laakiin laba jibbaar, iyo halkii loo baahnaa ciddiyaha gacmaha.
xayndaabka xadhigga. Dhamaan safafka tamaandhada ah waxay soo taagaan shabakado laba-mitir ah. Iyaga oo ku xiran duurka iyagoo leh khudaar. Faa'iidada naqshadahan ayaa ah in maaddaama uu baadiyaha u korayo, waxa laga dhigi karaa mid ka mid ah heerka halbeegna ku xiran yahay.
Wixii "King of Giants", mid ka mid ah hababka qotodheegan ee kor ku xusan ayaa shaqayn doona. Xulo xushmaddaada.
Goobta furan, dharka ugu sareeya ee seedling xoog leh waxaa la fuliyaa laba bilood ka dib soo baxa geedo. Under geed ku samee isku dar ah ee 0.5 litir oo Doodwanaag, laba kiniinada microfertilis, a qaado oo nitrophoska iyo 0.5 tsp. boric acid.
Wax walba waxaa lagu qasi karaa 10 litir oo biyo ah. Burburkii ayaa ku qaatay lakabkan. Bil ka dib, bilawga bisha Luulyo, quudinta soo noqnoqda ayaa la fuliyaa. Isku dar ah, labada koowaad ee hore waxay la mid yihiin kan hore, iyo 1 tbsp dheeraad ah ayaa lagu daray. l potassium sulfate. Xalka sidoo kale wuxuu u baahan yahay litir kiriim kasta.
Marka xilliga jimcaha bilaabmayo, waxaa lagu talinayaa in lagu daro isku dar ah 10 g oo ah milix iyo 10-15 g of superphosphate halkii mitir ah inta lagu jiro waraabinta ka yar baadiyaha.
Of cayayaanka ee King of Giants, kaliya whitefly weerari karaan. Waxay u muuqataa inta badan haddii yaanyo ku koraan aqalka dhirta lagu koriyo, halkaas oo xaaladaha heerkulka iyo qoyaanka hawada aan la arkay. Haddii ay dhacdo dhaawac aad u daran warshadda, waa lagama maarmaan in la gooyo caawimada cayayaanka gaarka ah sida "Aktara", "Aktellika", "Fitoverma", "Iskra-Bio".
Sida qiyaasta ka hortag ah, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo bakeeriga dhoobada: 150 g oo toonta la jajabiyey ayaa lagu qasan yahay litir biyo ah oo lagu mudo shan maalmood. Ka dib markii buufin geedka.
Haddii ay duurka u lahayn xiran waqti, waxay ku dhufan kartaa kallana miro. Tilmaamaha ugu horreeya ee cudurka, dhirta waxay u baahan tahay in lagu baari karo (markaad doorato): "Profit Gold", Bordeaux isku dar, "Abiga-Pik", "Fitoverm".
Dhibaatooyinka oo dhan waa laga ilaalin karaa haddii xaaladaha heerkulka loo baahan yahay, qoyaan, waraabinta, saacadaha iftiinka dayactirka, iyo Bacriminta ayaa la sameeyaa waqtiga.
Waxaa jira dhowr marxaladood oo yaanyo yaanyo ah: cagaar, caano, bunni, casaan iyo buuxa (casaan). Labadii marxaladood ee ugu dambeeyey, miraha beeraha waxaa la goostay haddii midhaha si dhakhso ah loogu soo diro shaqeyn ama la cuno.
Haddii gaadiidka miraha la qorsheeyay, markaa waa inuu jiraa marxaladda caanaha iyo brownka. Cagaarka iyo caanaha ayaa soo go'ay. Waxay jiifan karaan ama dukumiintooda ama waxaa loo diraa qashin. Goosashada ugu dambaysa waa in la sameeyaa ilaa heerkulka habeenkii hoos u dhaco 8 digrii.
Ururinta waxaa la qabtaa 5-7 maalmood. Goosashada waa ka fiican in la geliyo sanduuqyada laba ama saddex lakab. Ku dhaq tamaandhada uma baahnin nadiifin ku filan dhulka. Haddii Bisaylkiisa midhaha la qorsheeyey, ka dibna laba ama laba yaanyo bislaado waa in la dhigo sanduuqa ee yaanyada cagaaran.
Tani waxay gacan ka geysaneysaa in la xoojiyo nidaamka Biyaha. Haddii aad rabto in beergooyinku ay jiifaan inta ugu badan ee suurtogalka ah, markaa waa in lagu kala soocaa inta ugu badan ee suurtogalka ah ee qaangaadhka.
Ma taqaanaa? Sanadkii 1893, Maxkamadda Sare ee Maraykanka waxay xukuntay in yaanyada loo tixgeliyo khudradda, ma aha nooca berry, maadaama habka wax lagu kariyo ay la mid tahay khudaarta.
Dhibaatooyinka suurtagalka ah iyo talooyinka
Haddii sariiraha ay sii bataan, dhirta ayaa badanaa weeraro cudurada iyo cayayaanka. Si looga fogaado tan, waxaa lagama maarmaan ah in lagu beero geedo wanaagsan.
Haddii biyuhu aysan ku filnayn, miraha waxay bilaabi doonaan in ay jabaan, caleemuhu waxay noqon doonaan huruud iyo dhacaan. Sidaa darteed, waa inaad si cad u raacdaa nidaamka waraabka ee la soo xulay.
Iyadoo la'aanta potassium ee ciidda midhaha ayaa la rinjiyeeyay si aan cidhiidhi ahayn, cagaar ama nabaro iftiin leh. Qaybta maqan waa in lagu daraa.
Iyada oo xad-dhaaf ah ee nitrogen ee caleemaha iyo ugxan-jira waxaa jiri doona horumarin tartiib tartiib ah. Si aad u xalisid dhibaatada ayaa ka caawin doonta inaad waraabiso biyo badan.
Iyada oo aysiidhka sii kordhaya ee ciidda, heerkul hooseeya, oo leh la'aanta iftiin, miraha ayaa dhici doona. Dilida ciidda, lime samaynta.
Sida aad arki karto, noocyada kala duwan ee tamaandhadani waa mid u adkaysata cudurada marka loo eego kuwa kale. Iyo iyada oo daryeelka saxda ah ee sariiraha guud ahaan waxaa jiri doona dhibaato jirin geedka.